Lụọ ọgụ COVID 2019, Anyị na-arụ ọrụ! -News-VSmile Co., ltd
Lụọ ọgụ COVID 2019, Anyị na-eme ihe!
Oge: 2020-03-26 ikwu:44
Na-enyere ndị ahịa anyị aka ịlụ ọgụ COVID 2019, anyị nọ n'ọrụ!
Anyị na-ezigara ndị ahịa anyị ihe nkpuchi na-enweghị ihe nkpuchi. Na-enyere ndị ahịa aka ịlụ ọgụ COVID 2019, anyị nọ n'ọrụ!
Taa, anyị kwakọtara ọtụtụ ihe nkpuchi maka ịga mba ọzọ, n'ihi na ndị ahịa anyị na-achọ enyemaka mgbe niile. Anyị kwesịrị inye ha aka n'ihi na ha nyekwaara anyị aka n'oge nsogbu na China. Anyị abụghị naanị mmekọrịta mmekọrịta, anyị bụ ndị enyi. Ka nje corona na-aga n’ihu, ọtụtụ mba na ndị mmadụ bu ya.
Kedu otu ị ga-esi chebe onwe gị pụọ na nje corona virus? Lee, anyị nwere ụfọdụ ndụmọdụ maka gị:
1. Gbalịsie ike ka ị nọrọ n'ụlọ, agbanyeghị ma ọ bụ nkwenye nke gọọmentị gị, nke a bụ ụzọ kachasị dị irè.
2. Mgbe ị ga-apụ, biko ga-eyi mkpuchi ihu ma ghara imetụ ihe ọ bụla aka n'ihu ọha ma ghara imetụ anya gị aka. Mgbe ịlaghachitere n'ụlọ, biko saa aka gị ma ọ dịkarịa ala 20 sekọnd na uwe disinfect na akpụkpọ ụkwụ na mmanya 75%.
3. Mgbe anyị chọtara ndị emetụtara, gọọmentị anyị ga-ahụ ndị niile ọ zutere ma kpọtụrụ tupu oge ahụ, ndị mmanye chọrọ ka ha nọrọ n'ụlọ, mgbe ụbọchị iri na anọ gasịrị, ma ọ bụrụ na enweghị mgbaàmà ọ bụla metụtara nje ahụ, nke ahụ pụtara nchekwa.
4. Ọ bụrụ na emetụta ha ma ọ bụghị oke njọ, ha nwere ike iji ọgwụ ọdịnala ndị China ma ọ bụ ọgwụ si n'ụlọ ọgwụ, nọrọ n'ọnụ ụlọ dị iche iji gbakee. Ọ bụrụ na ọ dịghị njọ, ọtụtụ nwere ike ịgbake n'oge a.
5. Nọgidenụ na-enwe ezi obi ma na-emega ahụ ka ị nwee ahụ ike ma ghara ịpụ apụ mgbe mgbe.
Site n'ụzọ, ụlọ ọrụ anyị nwere obere ihe nkpuchi, ma ọ bụrụ na ịchọrọ, biko kpọtụrụ anyị, anyị dị njikere inyere gị aka. Ezi echiche maka gị！
N'ikpeazụ, Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụ ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị, dị ka eze zirconia blocks, milling burs, PMMA PEEK na WAX. Nwere ike iji oge a ịtụ. Maka na mgbe ọrịa ahụ gafechara, enwere ike ị ga-enwe ngwongwo ngwongwo, a na-atụ aro ka ịdebe tupu oge eruo. Debe ihe zuru ezu ozugbo ihe niile gara nke ọma. Bido ọrụ n’agaghị echere ihe.
Nwere ike ịkpọtụrụ anyị ma anyị na-anabata gị. Ugbu a nọrọ n'ụlọ, chere maka mbupu.
Nwee oge ka gị na ezinụlọ gị na ụmụaka nọrịa. Ihe niile ga-adị mma.
Jisie ndi enyi m niile.
(Ọhụrụ ngwaahịa-3D gbakwunyere Multilayer Zirconia ngọngọ)
Омогаем наших клиентов подготовиться к коронавирусу COVID 2019: Kpọtụrụ anyị
Ы в йействии
Мы отправляем маски нашем клиентам, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ị nweta ihe ntanye. Агодаря ваших помощи, приветов и поддержках, киветов и поддержках, киветов и поддевках, киветов и вроддевках, киветов и поддержкал, киветоо и поддевках, киветов и поддевках, кghaва Китай провёл самое Ọ bụrụ na ị chọrọ
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe.
Пропраганде нашего правительства и с оим опытам, bụ ihe:
Адо часто мыть урки мылом и не меньше 15 akụkụ .;
Maka 75% ndị ọzọ na-agbakwunye iji.
2 НАДО НАДО - НЕ НАДОыходить из дома если возможно;
НАДО НАДОопимать руку или обнимать с чужghaми.
Ходить с маской не считает странно, делаете так, можете защищать себя и своих любимых Iji.
Ihe niile na-eme ihe ozugbo, ihe niile ga-agafe;
Ihe ga-agafe ga-adị mma.
PREV: Nnọọ na Vsmile Factory
OSOTE : Ihe ohuru --- 3D Plus Multilayer Zirconia Block iwebata
Vsmile Mgbanwe PMMA